gold price up(gold price up) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
लगानीकर्ताका अधिकांश माग राष्ट्रबैंकसँग सम्बन्धित, सहमति भो धिबोसँग
समृद्धि फाइनान्समा नयाँ सञ्चालक नियुक्त
सुन र चाँदीको भाउ आज बढ्यो, कतिमा भइरहेको कारोबार ?
काठमाण्डौ । लगातार घटिरहेको सुनको भाउ कारोबारको पाँचौँ दिन बिहीबार एकैपटक तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७० हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७० हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बुधबार नेपाली बजारमा सुन तोलामा एकैदिन ६०० रुपैयाँले घटेको...
सुनको भाउ आज ह्वात्तै बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
काठमाण्डौ । कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । तिहार बिदापछि खुलेको कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा रु ७०० ले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तोला रु. ७०० ले बढेर शुक्रबार प्रतितोला छापावाल सुन रु. ७१ हजार २०० र तेजाबी रु. ७० हजार ९०० कायम भएको हो । कारोबारको पाँचौँ दिन बिहीबार...
तिहारको पूर्वसन्ध्यामा सुनको भाउ रु. ६०० ले बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा एकैपटक रु. ६०० ले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलामा रु ६०० ले बढेर प्रतितोला छापावा सुन रु. ७१ हजार र तेजाबी सुन रु. ७० हजार ७०० कायम भएको छ । अघिल्लो दुई दिन बुधबार बिहीबार प्रतितोला छापावाल सुन रु. ७० हजार ४०० र तेजाबी सुन रु. ७० हजार १०० थियो ।...
लगातार गिरावट आएको सुनको भाउमा सामान्य सुधार, चाँदीको भाउ पाँच दिनदेखि स्थिर
काठमाण्डौ । लगातार गिरावट आइरहेको सुनको भाउमा बुधबार कारोबारको चौथो दिन झिनो सुधार आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुन तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको छ । जसअनुसार बुधबार प्रतितोला छापावाल सुन ७० हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७० हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि मंगलबार तोलामा २०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला...
काठमाण्डौ । लगातार ओरालो लागेको सुनको भाउ दुई दिनमै तोलामा १ हजार ७०० रुपैयाँले बढेको छ । तोलामा हिजो बुधबार ६०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज बिहीबार फेरि एकैदिन १ हजार १०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा १ हजार १०० रुपैयाँले बढेर सुन प्रतितोला छापावाल ७० हजार ९०० र तेजाबी ७० हजार ६ सय रुपैयाँ...
काठमाण्डौ । लगातार ओरालो लागेको सुनको भाउ बुधबार तोलामा रु ६०० ले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार तोलामा रु ६०० ले बढेर सुन प्रतितोला छापावाल ६९ हजार ८०० र तेजाबी ६९ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको छ । लगातार दुई सातादेखि सुनको भाउमा गिरावट आइरहेको थियो । पहेँलो धातु सुनको भाउ फेरि आज मंगलबार एकैपटक तोलामा ८०० रुपैयाँ...
सुनको भाउ फेरि उकालो लाग्दै, आजैमात्र तोलामा रु. ६०० बढ्यो
काठमाण्डौ । सुनको भाउ बुधबार फेरि तोलामा ६०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार तोलामा ६०० रुपैयाँले बढेर सुनको प्रतितोला छावापाल ७२ हजार रुपैयाँ र तेजाबी ७१ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सुनको भाउ हिजो मंगलबार प्रतितोला छापावाल ७१ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी ७१ हजार १०० रुपैयाँ थियो । सुन...
सुनको भाउ आज सामान्य बढ्यो, प्रतितोला कति ?
काठमाण्डौ । लगातार ओरालो लागेको सुनको भाउ आइतबार सामान्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको छ । जसअनुसार आइतबार प्रतितोला छापावाल सुन ७१ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी ७१ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । गता साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले...
सुनको भाउ यो साता रु. ४०० बढ्यो, आज तोलाको रु. ७१ हजार
काठमाण्डौ । लगातार घट्दै गएको सुनको भाउ यो साता अघिल्लो साताको तुलनामा ४०० रुपैयाँले बढेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार ४०० रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ अन्तिम दिन शुक्रबार भने ४०० रुपैयाँले नै बढेको छ । कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुन तोलामा भने ३०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलामा ३००...
ओरालो लाग्दै गरेको सुनको भाउ आज एकैदिन तोलामा रु. ११ सयले बढ्यो
काठमाण्डौ । दुई सातायता ओरालो लागेको सुनको भाउ सोमबार एकदिनै तोलामा १ हजार १०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तोलामा १ हजार १०० रुपैयाँ बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७१ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७१ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुन तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला...
सुन तोलामा रु. २०० ले बढ्यो
काठमाण्डौ । कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार सुन तोलामा रु २०० ले बढेको छ । कारोबारको पहिलो दिन आइतबार तालामा रु ५०० ले घटेको सुनको भाउ फेरि उकालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुन तोलामा रु २०० ले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन रु ७१ हजार ७०० र तेजाबी रु ७१ हजार ४०० कायम भएको छ । आइतबार प्रतितोला छापावाल सुन रु ७१ हजार...
सुन तोलामा आज एकैदिन रु. १ हजारले बढ्यो, भाउ फेरि उच्च विन्दुमा
काठमाण्डौँ । नेपाली बजारमा बुधबार सुन तोलामा फेरि एकैदिन १ हजार रुपैयाँले बढेर दोस्रोपटक अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार तोलामा १ हजार रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छावाला सुन ७३ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७३ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनको यो भाउ अहिलेसम्म उच्च हो । भदौ ९ गते पनि...
सुन तोलाको रु. ७३,४००, आजमात्रै रु. ८०० ले बढ्यो
काठमाण्डौ । सुन तोलामा बिहीबार फेरि एकैपटक ८०० रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपाली बजारमा बिहीबार छापावाला सुन प्रतितोला ७३ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी ७३ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनको भाउ मंगलबार तोलामा ९०० रुपैयाँले घटेर छापावाला सुन ७२ हजार ६०० र तेजाबी सुन ७२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो...
सुनको भाउ अचाक्ली, आजमात्रै तोलामा रु. १ हजारले बढ्यो
काठमाण्डौ । बहुमूल्य पहेँलो धातुका रुपमा रहेको सुनको भाउ नेपाली बजारमा हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । तोलामा सोमबार फेरि १ हजार रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाला सुन ७३ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७३ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको छ। यो नेपालकै इतिहासमा हालसम्म उच्च मूल्य हो । हिजो आइतबार पनि एकै दिन तोलामा १ हजार २०० रुपैयाँले सुनको...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारको इतिहासमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार तोलामा एकैदिन १२ सय रुपैयाँले बढेर छापावाला सुन प्रतितोला ७२ हजार ५०० र तेजाबी सुन प्रतितोला ७२ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको हो । यो मूल्य नेपालको इतिहासमै उच्च रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ...
लाभांश प्रस्ताव गर्ने पहिलो वाणिज्य बैंक बन्यो माछापुच्छ्रे, बोनस र नगद कति ?
अशोक लेलैण्ड दसैँतिहारको बहार, स्योर सटका साथै बम्पर उपहार
मेगा बैंकले भोजपुरका साना किसान तथा व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने
साहस उर्जाको आईपीओ पहिलो दिन नै १.२१ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड, कति पर्यो आवेदन ?
साना लगानीकर्ता अझै अन्यौलमा, भन्छन्–‘केही दिनपछि मात्र बजार प्रवेश गर्दा उचित’
सेबोनमा धर्ना दिँदै लगानीकर्ता, वार्तामा नआए आमरण अनसन बस्ने घोषणा
बागमती प्रदेशको सबैखाले सवारी कर, दर्ता र नवीकरणको शुल्क अब इसेवाबाट भुक्तानी गर्न सकिने
सेयर बजारमा उछाल, विश्लेषक भन्छन्–‘करेक्सन सकियो, अब नेप्सेले नयाँ उचाइ चुम्छ’
सेबोनसँग आज वार्ता गर्दै लगानीकर्ता, यस्ता छन् पुँजीबजार सुधारका अजेन्डा
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरुले घटाउन थाले निक्षेपको ब्याजदर
सिटिजन्स बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्टमा विशेष छुट